June 2016 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
सरकारी वकिल कार्यलयका नायव सुब्बा घुस लिँदा-लिँदै पक्राउ
6/30/2016 09:55:00 PM अपराध , मुख्य समाचार , समाचार
१६ असार, काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय काठमाडौंका नायव सुब्बा घुस लिँलालिँदै रंगेहात
पक्राउ परेका छन् ।सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाका अभियुक्तसँग घुस लिँदै नायब सुब्बा दिपककुमार कार्कीलाई अख्तितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
कार्कीले मुद्दा चाँडै अगाडी बढाई मिलाइदिने भनि घुस रकम मागेका थिए । अभियुक्तका आफन्तसँग घुसबापत लिएको २० हजार रुपैयाँसहित काठमाडौं-१३ कालिमाटीस्थित युनाइटेड फाइनान्स अगाडिबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
6/30/2016 02:48:00 PM विचार
'जडिबुटीबाट क्यान्सरदेखि हेपटाइटिस्सम्म निको हुन्छ'
6/30/2016 02:44:00 PM समाचार , स्वास्थ्य
काठमाडौं, असार १६ गते । सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत ५४ वर्षीय विश्वनाथ रेग्मी प्रोस्टेट ग्लान्ट बढ्ने समस्याले पीडित भए। दोस्रो चरणमा पुगिसेको भन्दै उनलाई चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी खुर्केर फाल्नुपर्ने सुझाव दिए। तर शल्यक्रियाको बिकल्प खोजिरहेका उनी आयुर्वेदिक उपचार परामर्श केन्द्रमा पुगे।
उक्त केन्द्रका कृष्णप्रसाद पोखरेलको जडिबुटी औषधि खाएपछि आज उनलाई निकै राम्रो भएको छ। 'पिसाबमा संक्रमण हुने, ज्वरो आउने र बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ उनको औषधिले मलाई निकै राम्रो भएको छ', नायब महालेखा परीक्षकका रुपमा कार्यरत रेग्मी भन्छन्, 'उनले ४५ दिन औषधि खानुपर्छ भनेका थिए, आज मैले २० औं दिन औषधि खाइरहेको छु तर मलाई धेरै ठीक भएको छ, म पुरानै अवस्थामा पुगिसकेँजस्तो महसुस भएको छ।
भैरहवाकी ४३ वर्षीया मायाकुमारी पुनको पित्त थैली र कलेजोको बीचमा मासु पलाएको जानकारी बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालले दियो। सो अस्पतालले त्यसलाई क्यान्सरको मध्य अवस्था भनेर समेत पहिचान गर्यो।
पित्त थैलीमा पानीको फोका देखिएको, कलेजो पनि खराब भई हेपटाइटिस् भइसकेकोले शल्यक्रिया गर्नु अत्यन्तै गम्भीर थियो। तत्कालै शल्यक्रिया गर्न आँट गरेन अस्पतालले। त्यसपछि उहाँ ललितपुरको लुभुमा रहेको आयुर्वेदिक उपचार परामर्श केन्द्रमा पुगिन्। सोही केन्द्रको औषधि सेवनपछि हाल उनलाई निको भएको छ।
'जडिबुटी औषधि सेवन गरेपछि निको भएको छ । पछिल्लो ल्याब रिपोर्टले त्यो मासु हटिसकेको देखाएको छ', उनले भनिन्, 'अस्पतालले पनि लगभग अब निको भएको भनेको छ ।' उनले उक्त औषधि दुई महिनादेखि सेवन भने गरिरहेकी छन् । अरु केही समय औषधि सेवन गर्नुपर्ने पोखरेलले बताइन् ।
गोंगबु बस्दै आएकी बुटवलकी अर्की ६९ वर्षीया लक्ष्मी छन्त्यालको पाठेघरमा क्यान्सर भएपछि भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा रेडियोथेरापी सुरु गरियो । लामो समयसम्म थेरापी गराउँदा पनि निको हुने लक्षण नदेखिएपछि उनी २०७१ भदौ ७ गते सो अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई सोही आयुर्वेदिक उपचार केन्द्रमा औषधि सुरु गरिन् ।
हाल उनलाई धेरै ठीक भइसकेको छ। उनी भन्छिन्, 'भक्तपुर अस्पतालमै पुनः परीक्षण गराएँ, धेरै निको भइसकेको पछिल्लो ल्याब रिपोर्टमा देखिएको छ । औषधि त सेवन गर्दैछु तर अब मलाई निको भएको महसुस भएको छ।'
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-३ लुभुस्थित त्रिपिंगेश्वर महादेवस्थान नजिकैको आयुर्वेदिक उपचार परामर्श केन्द्रमा उपचार गराउन आउने यस्ता बिरामीको भींड नै लाग्ने गर्छ।
विशेषतः कलेजोमा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका समस्या, आधुनिक उपचार पद्दतिले निको नहुने खालका विभिन्न प्रकारका हेपटाइटिसहरु, कतिपय क्यान्सर, पिसाव नली एवम् पित्तथैलीका साथै यौनाङ्गमा हुने जटिलता, प्रोटेस्टो मेघाली तथा एचआइभी एड्सको समेत उहाँले आयुर्वेदिक उपचार गर्दै आएका छन् कृष्णप्रसाद पोखरेलले।
निजामति सेवाबाट सेवानिवृत गोरखा खरिबोट-९ का ६५ वर्षीय पोखरेलले बुबा र हजुरबुबाको बैद्य पेसाबाट यो उपचार पद्दति सिकेका हुन्।
'मेरो कुनै औपचारिक अध्ययन होइन तर मेरा बाजे, हजुरबुबा र बुबाले परापूर्वकालदेखि नै गर्दै आएको पेसा र उहाँहरुले नै मलाई सिकाएकोले मैले अहिले यस्ता धेरै रोगको उपचार गर्ने गरेको छु', उनी भन्छन्।
२०५६ सालदेखि उनी यसैमा ब्यस्त छन्। एचआइभी एड्सदेखि अरु कैयौँ रोगको सफल उपचार गरेपछि उनले निको पारेका बिरामी फेरि सोही अस्पतालमा पठाउँछन्। यसबाट धेरै चिकित्सकबिच चर्चा चल्यो र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि अध्ययन गर्यो। उनलाई परिषदले हाल प्रमुख अनुसन्धानकर्ताको रुपमा मनोनयन गरी अनुसन्धानको अनुमति दिएको छ।
उनले जटिबुटीबाट उपचार गरी निको बनाएका प्रमाणहरु विभिन्न अस्पतालका ल्याब रिपोर्टबाट प्राप्त भएपछि विशेषगरी कलेजो रोगका बारेमा उपचारका लागि अनुसन्धान गर्न गत फागुन ३ गते परिषदले उनलाई पत्र दिएको छ । उनलाई हेपटाइटिस बि, हेपटाइटिस सि र लिबर सिरोसिस्सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि परिषदले अनुमति दिएको हो।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको मातहतमा ती रोगहरुको औषधि उनले बिरामीलाई सेवन गराउने, त्यसको खर्च परिषदले ब्यहोर्ने र उनले दिने औषधिको परिणामको रिपोर्ट समय समयमा लिनेगरी परिषदको नीति नियमबोजिम अनुसन्धान गर्नेगरी प्रमुख अनुसन्धानदाताको रुपमा परिषदले अनुमति दिएको छ । उनले औषधिको मात्रा, त्यसको विश्वसनीयताको मापन र ती औषधिको निर्माणसम्बन्धी अध्ययन परिषद मातहतमा रही अनुसन्धान गर्नेछन् ।
उनको औषधिको स्रोत नेपालकै जडिबुटी हुन् । नेपालकै जडिबुटीबाट उनले गर्दै आएको उपचारको विश्वसनीयताको अध्ययनपछि नै परिषदले यो अनुमति दिएको हो । उनले विसं २०५६ देखि आयुर्वेद उपचारको क्लिनिक खोलेर उपचार सुरु गरेका हुन् । 'औषधि त म धेरै पहिला देखि नै दिन्थेँ तर आयुर्वेद उपचारको क्लिनिक नै खोलेर सेवामा लागेको भने २०५६ सालदेखि नै हो', उनी भन्छन् ।
यतिखेर उनको लुभुस्थित उपचार केन्द्रमा नेपालबाहेक हङकङ, मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्याण्डका बिरामी उपचाररत् छन् । उनले करिब १२ देशका विदेशीलाई उपचार गरी निको पारेको बताउँछन् । नेपालका भने यी रोगका लगभग ६० भन्दा बढी जिल्लाका बिरामी आफूकहाँ आएको उनको अनुभव छ ।
'जडिबुटी उपचारमा हामीहरुलाई भन्दा बिदेशीलाई बढी विश्वास र चाख छ', उनी भन्छन्, 'स्वदेशी र बिदेशी चिकित्सक एवम् यस्तो उपचारमा सम्लग्न बिज्ञले औषधिको रहस्य एवम् जडिबुटीको बारेमा सोध्ने गरेका छन् ।'
बैकल्पिक चिकित्साको क्षेत्रमा कामगर्ने कैयौँ देशका विज्ञ एवम् विद्यार्थीहरुले उनीसँग बसेर अनुसन्धान गरेका छन् भने उहाँको उपचार बिधिको अध्ययन गरेका छन् ।
'मैले एचआइभी एड्स निको पारेका विरामी नेपालका भन्दा विदेशी बढी छन् । धेरैजसो भारतीयहरु छन्', उनी भन्छन्, 'तर उनीहरुले अहिले आफूलाई एड्स थियो भनेर भन्न चाहँदैनन् ।' अस्पतालपछि अन्तिम बिकल्पका रुपमा आफूकहाँ आएका कैयौं विरामी औषधिपछि पुनः गरिएको मेडिकल ल्याबमा एचआइभी नेगेटिभ देखिएकाहरुको सूची छ उनीसँग ।
उनले जडिबुटी प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको चितवनको रत्ननगरमा कान्तिपुर जडिबुटी प्रशोधन उद्योग छ । कतिपय औषधिको स्रोत आफ्नै उद्योगमा आउने जडिबुटी भए पनि अधिकांश जडिबुटी लिन भने आफै नै टाढा टाढा जानुपर्ने उनी बताउँछन् । लाखौँ रुपैयाँ अस्पतालमा सक्दा पनि निको नभएपछि अन्तिम बिकल्पको रुपमा आफुकहाँ आउने र सानोतिनो जडिबुटीले नै निको भएको पाउँदा आफूलाई जिवनमा सबैभन्दा ठूलो आनन्द प्राप्त हुने उनी बताउँछन् ।
'जडिबुटी उपचारका नाममा अहिले धेरै बिकृतिहरु छन् । विज्ञापन दिएर हल्काफुल्का उपचारका लागि पैसा असुल्ने गरेका देखेकोले आफूले कहिल्यै यस्तो विज्ञापन गरेको छैन', उनी सुनाउँछन्, 'उपचारमा आएका बिरामीकै एक अर्काको सम्पर्कबाट मसँग विरामी आउने गरेका छन् ।'
'हामीले हाम्रा अमूल्य जडिबुटी चिनेर पनि सदुयोग गर्न नसक्दा हामी रोगी भएका मात्र छैनौँ कि हाम्रो यो अमूल्य सम्पदा गुन्दु्रकको भाउमा बाहिरिएको छ', उनी भन्छन्, 'तर हामी तिनै जडिबुटीबाट बनेका औषधि महङ्गोमा सेवन गर्न बध्य भएका छौँ ।'
यी सम्पदाको सदुपयोगका लागि सरकारसँग विशेष योजना चाहिने उनको धारणा छ । 'नेपालका जडिबुटीले निको नहुने कुनै रोग छैन', उनी भन्छन्, 'तर त्यतातिर हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न नसक्नु दुःखद हो । रासस
6/30/2016 02:41:00 PM विज्ञान/प्रविधी
काठमाडौं, असार १६ गते ।माइक्रोम्याक्सले युनाइट सिरिजको दुई नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। उसले युनाइट ४ र युनाइट ४ प्रो सार्वजनिक गरेको हो।
च्याउ खाँदा आमाको मृत्यु ,तीन जना छोराछोरीसहित छ जना बिरामी
6/30/2016 02:30:00 PM समाचार , स्वास्थ्य
दोलखा,असार १६ गते । बुधबार दोलखाको दुर्गम गाविस कालिञ्चोक–७ मा च्याउ खाँदा आमाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना छोराछोरीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
मृत्यु हुनेमा ४८ वर्षीया फूलमाया तामाङ रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । आमासँगै विषालु च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी परेका १७ वर्षीया छोरी अनिता तामाङ, १४ वर्षीय छोरा काले तामाङ र नौ वर्षीया छोरी सानुकान्छी तामाङ भने बेहोस अवस्थामा रहेको कालिञ्चोकबाट स्थानीय ग्लाबो तामाङले जानकारी दिए ।
च्याउ खाएकै कारण सोही स्थानका अन्य तीन जना पाख्रिन परिवार पनि बिरामी परेका थिए । उनीहरुलाई भने घरेलु उपचारपछि सामान्य अवस्थामा फर्काइएको बताइएको छ । फूलमायाका छ जना छोराछोरीमध्ये एक जना विदेशमा रहेको र अरु दुई जना भैँसी गोठमा जङ्गलमा बुबासँग बसेका कारण उनीहरुलाई केही नभएको बताइएको छ ।
जङ्गली विषालु च्याउ खाँदा आमालाई सुरुमा मानसिक समस्या देखिएको र पछि उनी खोलामा लडेर मरिरहेको अवस्थामा भेटेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । एकै परिवारका चार जनाले खाएको च्याउले आमाको ज्यान लिएको छ भने छोरोछोरी बेहोस अवस्था रहेकाले उपचारका लागि चरिकोट ल्याउन लागिएको बताइएको छ । घटनास्थलतर्फ प्रहरी गएको छ ।
घटनास्थलतर्फ प्रहरी गए पनि वर्षा तथा टाढा भएका कारण प्रहरीले आधिकारिक जानकारी दिन नसकेको प्रहरी निरीक्षक विनोदकुमार सुनुवारले जानकारी दिनुभयो । घटना च्याउ खाएर नै होकि होइन भन्ने प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउने बताएको छ । रासस
बाबुरामको प्रस्तावः तीन वटै चुनाव एकैचोटि गरौं
6/30/2016 02:19:00 PM समाचार
काठमाडौंमा , असार १६ गते । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले तीन वटै चुनाव एकै पटक गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्वन्धी आयोगको काम सकेर सीमांकन पुनःसंरचना गरेपछि चुनाव गर्नु पर्ने उनले बताए । बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले मंसिर, चैत वा अर्को वर्ष जहिले चुनाव गरेपनि नयाँ शक्ति तयार रहेको बताए ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव एकैपटक गर्नु पर्ने भन्दै उनले यसले खर्च पनि कम हुने बताए ।-अनलाइनखबरबाट
6/30/2016 02:13:00 PM समाचार
6/30/2016 02:09:00 PM समाचार
एउटै छानामूनि मनोरोगको सम्पूर्ण समाधान
6/30/2016 02:00:00 PM समाचार , स्वास्थ्य
काठमाडौं, असार १६ गते । नेपालमा मनोरोगको उपचार धेरैजसो अस्पतालका ओपिडी सेवामा मात्रै सिमित छ । ओपिडि सेवा औषौधी उपचारमा बढी केन्द्रीत हुन्छ । यसकारण मनोपरामर्श (काउन्सिलिङ)को अभाव देखिन्छ । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर एकान्तकुना जावलाखेलमा नशा तथा मानसिक रोग नयाँ अस्पतालको स्थापना भएको छ । रिदम न्यूरोसाइकियाट्री हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि नामबाट २५ बेडको नशा तथा मनोरोग अस्पताल खोलिएको हो ।
अस्पतालमा विज्ञहरुबाट ओपिडी सेवा, बिरामी भर्ना (कुरुवा बस्नु नपर्ने पनि व्यवस्था रहेको), २४ घण्टा मेडिकल अफिसरद्वारा सेवा, क्याबिन सेवा विज्ञबाट मनोपरामर्श आदि सेवा दिइने अस्पतालका निर्देशक एवं कन्सल्ट्यान्ट न्युरो साइक्याट्रिक्स्ट डा रितेश थापाले बताए । ‘जाँड, रक्सी, लागु औषध छुटाउने र त्यसपछि हुने पुर्नस्थापनाको पनि सुविधा छ, उनले भने, ‘गुणस्तरीय ल्याब सेवा, डे केयर, सबै किसिमका साइकोलोजिकल टेस्टिङ (जस्तै आईक्यू, ईईजी, ईसीजी, एक्स–रे र विद्युतिय प्रविधिद्वारा कडा किसिमका मानसिक रोगको उपचार ईसीटीसम्म गरिन्छ ।’
मानसिक समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेपनि सही उपचार नपाएर बिरामी भौतारिदै हिड्नु परेकोलाई सम्बोधन गर्न आफूले अस्पताल खोलेको डा थापाले बताए । ‘अस्पतालले एउटै छानामुनि सबै किसिमका मानसिक रोगको उपचार सेवा दिने भएकाले पनि मानसिक समस्या समस्याधानमा सहज हुने विश्वास छ,’ उनी भन्छन् ।--स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
घरमै डाक्टर– बच्चाले सिक्का वा गुच्चा निलेमा के गर्ने ?
6/30/2016 01:56:00 PM समाचार , स्वास्थ्य
उत्सुक र चकचके स्वभाव बच्चाहरूको गुण नै हो । सिक्का, गुच्चा, साना ब्याट्री लगायत अन्य धारिलो बस्तु उनीहरूले मुखमा हाल्छन् । गुच्चा निलेमा गोलो प्रकृतिको हुने भएकाले पेट, आन्द्रा हुदै दिसाबाट बाहिर निस्किन्छ । खानेनलीमा सिक्का अड्कियो भने तुरुन्त निकाल्नुपर्छ । पेटको भागमा बसिरहेको छ, अरु लक्षण देखाएको छैन भने ४ हप्ता कुर्न सकिन्छ । तर सिक्काको आकार ठूलो भएमा वा अन्य तिखो÷धारितो बस्तु भएमा तुरुन्त निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सिक्का आन्द्रामा पुगिसकेको भए जोखिम कम हुँदै जान्छ । सबैभन्दा खतरा भनेको बालबालिकाले ब्याट्रीहरू निल्नु हो । खेलौना र टिभीको रिमोटमा हुने साना ब्याट्री निलेमा त्यसमा भएको केमिकल बाहिर आउछ । त्यसले खानेनली फुटाउने र वरपरका अन्य अंगमा पनि असर गर्ने हुनसक्छ । ब्याट्री निलेमा सकेसम्म ४ घण्टाभित्र निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कहिलेकाही बालबालिकाले एसिड निल्न सक्छ । त्यसको सामान्य असरस्वरुप बान्ता हुनसक्छ । तर अन्य असर नदेखिने भएकाले अभिभावकहरूले निको भएको ठानेर उपचार गर्दैनन् । एसिडले कालान्तरमा पनि असर देखिने भएकाले बच्चालाई ढिलो नगरी अस्पताल पु¥याउनुपर्छ । -डा. विनिता जोशी, नर्भिक अस्पताल
6/30/2016 01:51:00 PM समाचार
पूर्वसचिव भन्छन्-'चिनियाँ कम्पनीले छाड्नु मेलम्चीका लागि सुखद'
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण २००१ देखि २००७ सम्म कुनै काम भएन । आयोजनाको मुख्य काम सुरुङ खन्ने भए पनि यो अवधिमा बाटो र पुल बनाउने जस्ता काम भए । स्थानीयका नाममा यसलाई मेलम्चीलाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा बनाउने काम भयो ।
सन् २००७ मा एडीबीको प्रोजेक्टको समय नै सकियो । एडीबी फर्किएर जान्छ भने जाओस् तर, हामी कुनै पनि शर्त मान्दैन भन्ने सोच पनि आएको थियो । तर, त्यो हुन सक्दैथ्यो किनभने सहायक कामका लागि नधेरै बजेट खर्च गरिसकेका थियौं र, अब आयोजनाको मुख्य काममा भने एडीबीको सहयोग लिन्नौं भन्न सकिँदैनथ्यो ।
ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनकालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड गठनका साथै केयुकेएल स्थापनासहितका तीनवटा ऐन अध्यादेशमार्फत आए । एडीबी पनि आयोजना अघि बढाउन तयार भयो । र, आयोजनाको पुनर्संरचना गरियो ।
सुरुङ खन्न एउटा र काठमाडौंमा पाइप लाइन विस्तारका लागि अर्को कार्यालय मेलम्ची-२ खडा भयो । ४६४ मिलियनको प्रोजेक्ट भए पनि स्रोतको अभावमा ३१७ मिलियनको खाका तयार भयो । त्यसमा एकपटक मात्रै गर्न सकिने कामका लागि पूरै बजेट राख्ने र पछि फेरि गर्न सकिने कामलाई चरणवद्ध गर्ने समझदारी भयो । त्यसअनुसार पाइप विस्तारका लागि करिव ६८ र सुरुङका लागि २४९ मिलियन डलर रकम छुट्याइयो ।
एडीबीको सहमतिमा सुरुङ निर्माण निर्माणका लागि सन् २००८ बाट मेलम्चीमा टेण्डर आहृवान भयो र चाइना रेलवे कम्पनी छनौट पनि भयो । उसले ४ वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो । पहिलो महिना राम्रै काम गरेको थियो । तर, त्यो धेरै समय रहन सकेन ।
‘चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसक्नुको कारण उपकरण नल्याएर नै हो, उपकरण भएको भए चिनियाँहरु काम नगर्ने मान्छे होइनन्’ मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
अवस्था यस्तो आयो कि चिनियाँ ठेकदार कम्पनी काम नै छाडेर हिँड्यो, जतिबेलासम्म उसले ५ किलोमिटर जति सुरुङ खनेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले आफू घाटामा परेको भन्दै थप बजेट बढाउन माग्यो । तर, नेपाल सरकारले दिएन । त्यतिबेलाको स्थिति सम्झँदै पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्, ‘मैले चिनियाँ ठेकेदारलाई नछो्ड्न सम्झाएँ । तिम्रो समस्या हेर्छौं, कामको गति बढाउ भनेको थिएँ । तर, कम्पनीबाट ठेक्का तोड्ने पत्र आयो ।’
थापाका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको गुनासो थियो कि फिनल्याण्डको कन्सल्ट्याण्टले समस्या बुझेन र दुःख दियो । अन्तिममा उसले पैसा पनि पुगेन, बढाइदेऊ भन्यो ।
कुलेखानी तेस्रोको उदाहरण दिएर चिनियाँ कम्पनीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि शक्ति केन्द्रहरुमा धायो पनि । र, २०१२ सेप्टेम्बरमा छोडेेर हिड्यो ।
थापाका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का तोडेर जानु नेपालका लागि सुखद बन्यो । उनले भने, त्यो बसिरहेको भए काम त हुने थिएन, फकाई फुल्याई गर्दा अलि अलि त हुन्थ्यो होला । तर, ढिला हुन्थ्यो । थापा भन्छन्-उसको काम गर्ने तौरतरिका पनि आधुनिक प्रविधिअनुसार थिएन ।
चिनियाँ कम्पनीले छाडेर गएपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गर्दैगर्दा नेपाली अधिकारीहरुलाई नेपालस्थित चिनियाँ दूताबासले के गर्ला भन्ने ठूलो डर थियो । किनभने उसले चाहेको अनुसार हुनसक्थ्यो र उसले नेपाललाई दबाव दिन सक्यो । तर, चिनियाँ दूताबासले दबाव दिएन र उसले यो तिमीहरुको व्यवसायिक प्रोजेक्ट हो, आफ्नो अनुकुल गर भन्यो ।
चिनियाँ कम्पनी हिँडेपछि मेलम्चीको नयाँ कथा सुरु
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ठेक्का तोडेर हिँडेपछि सुरुमा त मेलम्ची नबन्ने पो हो कि भन्ने आशंका थियो । आयोजनाको लागत पनि बढ्यो ।
जुन कारणले चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न सकेको थिएन, त्यो पक्ष सुधार्न आवश्यक थियो । त्यो भनेको डिजाइन सच्याउनु थियो ।
तर, सबै प्रक्रिया मिलाएर नयाँ ठेक्का आहृवान भयो । ५ वटाको ठेक्का परेकामा ३ वटा कम्पनीहरु फेल भए ।
अन्तिममा चिनियाँ कम्पनी सीएनसी र इटालियन कम्पनी सिने हाइड्रोवीच प्रतिस्पर्धा भयो । तत्कालीन भौतिक सचिव थापा भन्छन्, घुमाइफिराई फेरि चिनियाँ कम्पनी सीएनसीकै पक्षमा ठेक्का पर्छ कि भन्ने ठूलो डर थियो । तर, इटालिनय कम्पनीले ७ अर्ब र चाइनिज कम्पनीले १० अर्ब प्रस्ताव गर्‍यो । स्वभाविक रुपमा कम प्रस्ताव भएको इटालियन कम्पनी सिने हाइड्रोले ठेक्का पायो ।
ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा १ वर्ष मेलम्चीको काम हुनै सकेन ।
इटालियन कम्पनी पनि उस्तै
इटालियन कम्पनी निकै पुरानो थियो । १०० वर्षभन्दा बढी पुरानो कम्पनी भएकाले यो राम्रो कम्पनी हो भन्ने नेपालको बुझाइ थियो । र, उसले लेखेको प्रपोजल निकै राम्रो थियो । मेलम्चीका प्रमुख भट्टराई भन्छन्, यहाँ के लेखेको छ भनेर पढेर मात्र काम गर्ने हो भने पनि मेलम्ची आयोजना बन्छ भनेर हामीे भनेका थियौं ।’
तर, इटालियन कम्पनी पनि उस्तै रहृयो । उसले चिनियाँ कम्पनीले १० अर्ब अर्थात ३ अर्ब १८ करोड बढीको प्रस्ताव गरेको थाहा पाएपछि मेरो त पैसा कम भयो भन्दै काम थालेन ।
अवस्था के सम्म आयो भने एड्भान्स लिएको ९० दिनपछि त्यो रकम केमा प्रयोग गर्‍यो भनेर पत्र लेख्नुपर्‍यो । यदि नेपालले एड्भान्स फिर्ता लियो भने उसलाई ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो ।
यो डरपछि इटालियन कम्पनीले सामान खरिद गर्‍यो र मार्चबाट काम थाल्यो । तर, प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाली अधिकारीहरुकै शब्दमा खराब पठायो ।
यतिसम्म कि उसले नेपालीसँग होइन, एडीबीका अधिकारीहरुसँँग झगडा गर्‍यो । ठेकेदारले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि नेताहरुको घर दैलो चहार्न र आफ्नो पहुँच देखाउन थाले ।
जे गर्दा पनि नभएपछि ऊ आफैं काममा फर्कियो । झण्डै एक वर्षमा उसले झण्डै ७ हजार मिटर जत्ति टनेल खन्यो । तर, गत वैशाखमा गएको विनाशकरी भूकम्प र नाकाबन्दीले एक बर्षसम्म काम हुनै सकेन ।
पूर्वसचिव थापा भन्छन्, त्यत्रो भूकम्पले मेलम्चीको सुरुङ्गमा कुनै क्षति नहुनु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । भूकम्पपछि २ अढाइ महिनासम्म कोही छिर्न मानेन । पछि चेकजाँच गरेर सुरक्षित छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर काम हुन थाल्यो । लगत्तै नाकाबन्दीले असर गर्‍यो ।’-राजकुमार श्रेष्ठ/पुष्प ढुंगाना, अनलाइनखबरबाट
रसुवागढीमा फेरि पहिरो, प्रहरीसहित चालक चिनियाँ भूमिमा फसे
6/30/2016 01:42:00 PM समाचार
उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने रसुवागढी नाकामा बिहिबार दिउँसो फेरि पहिरो आएपछि आवातजावात अवरुद्ध भएको छ। साथै यसअघि गएको पहिरो पन्छाउन गएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि चिनियाँमा भूभागमा फसेको छ। पहिरोमा परी एक जना चिनियाँ नागरिक घाइते भएका छन्।
रसुवागढी भन्सारका प्रमुख केदार न्यौपानेले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार हिजो गएको पहिरो बिहान ११ बजेसम्म हटाएर यातायात सुचारु गरेपनि फेरि दिउँसो एक बजे ठूलो पहिरो गएको हो।
पहिरो खस्ने क्रम जारी भएकाले हटाउन नसकिएको न्यौपानेले बताए। पहिरो खसेपछि केरुङबाट सामान ल्याएर आएका करिब सय वटा मालबाहक गाडी पनि चिनियाँ भूभागमा अड्किएको न्यौपानेले बताए। सुख्खा पहिरो खसेका कारण केही दिनदेखि सो नाकामा यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ।-सेतोपाटीबाट
6/30/2016 01:32:00 PM मनोरञ्जन
सुन्तलीलाई भगाई लग्यो झिल्केले’बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गर्न लागेकी नव-कलाकार हुन् रीजा भुषाल । जसलाई यो चलचित्रको व्यापारले करिअरमा ठूलो असर पर्छ भन्ने थाहा छ । हुनत, यो चलचित्रमा उनी शिर्ष भूमिकामा छैनन् ।
तर, पनि रीजा आफ्नो कामलाई दर्शकले रुचाउनेमा ढुक्क छिन् । रीजाको काम राम्रो रहेको चलचित्रका निर्देशक ऋषिराज आचार्यको दाबी छ । साउन २१ गतेबाट चलचित्र रिलिज भएपछि रीजाको कामको मुल्यांकन हुनेछ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हरेक बर्ष नयाँ-नयाँ अनुहारको आगमन त हुन्छ । तर, उनीहरुमध्ये केहिले चर्चा र केहिले सफलता पाउँछन् । के रीजा यो भीडमा पर्लिन्, प्रतिक्षा गरौ ।
6/30/2016 01:24:00 PM आर्थिक
6/30/2016 01:12:00 PM विज्ञान/प्रविधी
6/30/2016 01:09:00 PM आर्थिक , समाचार
काठमाडौं, असार १६ गते । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर बिहीबार (अाजदेखि) कारोबार फुकुवा गरेको छ । बोर्डले विज्ञप्ती जारी गरि सेयर कारोबार फुकुवा गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले प्रतिकित्ता २८ सय ५१ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २९ सय ५१ रुपैयाँमा फर्दर पव्लिक अफरिंग (एफपिओ) जारी गर्न लागेपछि कम्पनीले तोकेको मूल्यले दोस्रो बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने भन्दै बोर्डले सेयर कारोबारमा रोक लगाएको थियो ।
हालसम्म प्रिमियम मुल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने सन्दभर्मा प्रष्ट नीति छैन । बोर्डले प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत आधार छिट्टै तयार गर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकोले तत्कालका लागि सेयर कारोबार खुला गरिएको जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार मूल्य पछि तय गरिने छ । तर कुनैपनि कम्पनीको सेयर लामो समय सेयर रोक्का राख्नु न्ययासंगत नहुने भएकाले नेपाल लाइफको सेयर कारोबार खुला गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिबिनै एफपिअोको मुल्य तोकेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट सूचना सार्वजानिक गरेको थियो ।-अनलाइनखबरबाट
6/30/2016 01:07:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असार १६ गते । फेसबुक र टि्वटरमा यसैसाता प्रतिवन्ध लगाइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चर्को पार्किङ शुल्क असुल गरिएको भन्दै हेलो सरकारमा उजुरी परेको छ ।
विमानस्थलको डोमेस्टिकतर्फको पार्किङ लटमा सवारी साधनको चर्को शुल्क तिर्नु पर्‍यो भन्दै टि्वटरबाटै उजुरी परेको हो ।
अहिले हेलो सरकारमा पछिल्लो समय ट्वीटरबाटै उजुरीहरु आउने क्रम बढेको छ । विमानस्थलको व्यवस्थापनपक्षसँग जोडेर पछिल्लो समय उजुरी बढेको हेलो सरकारका उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायले अनलाइनखबरलाई बताए ।
पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्नेबारे कुनै जानकारी नराखिएको र शुल्क तिर्ने चिटमा पनि समय, तिर्नुपर्ने मूल्य र संस्थाको नाम स्पष्ट नखुलाइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा भनिएको छ,-पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हो कि होइन, यदि पर्ने हो भने किन व्यवस्थित नगराइएको ? तिर्नुपर्दैन भने अनुगमन गरी कारवाही गरियोस् ।
गतसाता मात्रै विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी फेसबुक चलाएर बसेको भन्दै हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीपछि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा फेसबुक र ट्वीटर प्रयोग गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।-अनलाइनखबरबाट
6/30/2016 01:04:00 PM खेलकुद
काठमाडौं, असार १६ गते । स्पेनिस क्लव बार्सिलोनाका सुपरस्टार नेइमार र बार्यन म्यूनिखका डग्लास कोष्टा आसन्न रियो ओलम्पिकका लागि बढि उमेरको खेलाडीको रुपमा ब्राजिलियन टोलीमा छनौट भएका छन् ।
२३ बर्षमुनिको ओलम्पिक टोलीमा तीन खेलाडी बढि उमेरको राख्न पाउने नियम अनुसार ब्राजिलले घोषणा गरेको टोलीमा अर्का खेलाडी पाल्मेइरासका गोलरक्षक फर्नाण्डो प्रासपनि परेका छन् ।
ब्रजिलियन फुटबलको महारथी टोली सान्तोसका युवा स्ट्राइकर ग्याब्रियल बार्बोसापनि टोलीमा समाबेश गरिएका छन् । बार्बोसाले गत महिना ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गर्दै गोलसमेत गरेका थिए ।
ब्राजिलको उमेरसमूहको टोलीका प्रशिक्षक रोगेरियो मिकेलले टोलीको प्रशिक्षण गर्नेछन् । कोपा अमेरिकाको समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि नियमित प्रशिक्षक डुंगा बर्खास्तीमा परेका थिए ।
बुधबार घोषणा गरिएको ब्राजिली ओलम्पिक टोली यस्तो छ ।
गोलकिपरः फर्नाण्डो प्रास र विल्सन
डिफेण्डरः मार्क्विन्होस, लुवान, रोड्रिगो काइयो, जेका, विलियम र डग्लास सान्तोष
मिडफिल्डरः थियागो माइया, रोड्रिगो डोउराडो, फ्रेड, राफिन्हा र फिलिप एण्डरसन
स्ट्राइकरः नेइमार, डग्लास कोष्टा, ग्याब्रियल जेसस, ग्याब्रियल बार्बोसा र लुआन ।- अनलाइनखबरबाट
जापानमा अभिनेतृ गौरी मल्लमाथि ‘दुर्व्यवहार’
6/30/2016 12:59:00 PM विश्व , समाचार
न्यायका लागि गुहार माग्दै नेपाली दूतावासमा उजुरी
काठमाडौं । जापानमा बस्ने एक नेपालीले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै अभिनेत्री गौरी मल्लले टोकियोस्थित नेपाली राजदूतावासमा उजुरी दिएकी छिन् । मल्लले जेठ १८ गते उजुरी दर्ता गराएकी हुन् ।
गौरीले दूतावासमा दर्ता गराएको उजुरीमा ललितपुरको भैंसेपाटी घर भई जापानको साइतामा केनमा बस्ने शाक्य थरका एक नेपालीले उनीमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ ।
उजुरीमा मल्लले पीडकको नाम र ठेगाना सविस्तार उल्लेख गरेकी छिन् । तर, अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मल्लले उसका जहान परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले मिडियामा नाम सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरिन् ।
मल्लले अभिनय गरेको सिंहदरवार चलचित्र हेरेपछि आफू प्रभावित भएको भन्दै ती व्यक्तिले इमेल र टेलिफोन गरेर उनलाई जापान बोलाएका थिए ।
‘तपाईंजस्तो कलाकार नेपालमा बसेर केही हुँदैन, म तपाईंलाई जापानको कला क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिलाइदिन्छु र खाने-बस्ने राम्रो प्रवन्ध पनि गरिदिन्छु,’ आफूलाई दिएको प्रलोभन उद्वृत गर्दै गौरीले उजुरीमा लेखेकी छिन्, ‘हाललाई इको स्प्रे फर एयर फिल्टरको विज्ञापनको प्रस्ताव आएको छ, मलाई आफ्नै भाइ सम्झेर यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहोस् ।’
ती व्यक्तिले जापान आउनका लागि आफूलाई तीन लाख रुपैयाँ समेत पठाइदिएको गौरीले उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनैको प्रस्तावमा विश्वास गरेर गौरी गत मार्चमा जापान गएकी थिइन् । त्यहाँ पुगेपश्चात आफू ती व्यक्तिबाट शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार एवं यौन हिंसाको शिकार हुनु परेको गौरीको भनाइ छ । उनले त्यसबेला जापानमा करिब एक महिना बिताएकी थिइन् । हाल उनी नेपाल फर्किइसकेकी छिन् ।
यस विषयमा अनलाइनखबरले गौरीसँग सम्पर्क गर्दा उनले निवेदन दिएको स्वीकार गरे पनि विस्तृत विवरण दिन चाहिनन् ।
‘त्यो मान्छे त राक्षस नै हो, तर उसका जहान परिवारलाई बिचार गरी मैले यो विषयलाई अहिलेसम्म गुपचुप राखेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
गौरीले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको प्रमाण सुरक्षित राखेको बताएकी छिन् । ‘मैले त्यस व्यक्तिबाट एउटा लिखित माफीनामा चाहेकी छु,’ गौरीले भनिन्, ‘दूतावासले यसमा पहल गरिरहेको होला ।’
तर, नायिका मल्लले उजुरी दिएको महिना दिन बितिसक्दा पनि दूतावासले कारवाहीको कुनै पहल गरेको छैन । मल्लले दूतावासका साथै एनआरएन जापानसमक्ष पनि न्याय माग्दै निवेदन दिएकी छिन् ।-अनलाइनखबरबाट
6/30/2016 12:56:00 PM समाचार
मुस्ताङ , असार १६ गते । युरेनियम अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ र नुनको खानी अध्ययन गर्न मुस्ताङ आएको सरकारी टोलीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको छ ।
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा वि.सं २०७०/७१ सालमा गरिएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट पत्ता लागेको युरेनियमको अध्ययनमा थप नयाँ तथ्य फेला परेको टोलीले दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार र छुसाङ गाविसको तेताङमा नुनको खानी रहेको सरकारले औपचारिक रुपमा पुष्टि गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले वि.सं २०७०/७१ मा गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणमा लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किमि लम्बाइ र तीन किमि चौडाइमा युरेनियम भेटिएको थियो ।
‘युरेनियमका विषयमा नयाँ र सकारात्मक तथ्य फेला परेका छन्, यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ,’ खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् धर्मराज खड्काले भने, ‘समग्रतामा यसमा धेरै प्रगति देखिएको छ, युरेनियमको परिमाण धेरै र गुणस्तर पनि उत्कृष्ट खालको भेटिएको छ ।’
युरेनियमलाई इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणका लागि कच्चापदार्थका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा युरेनियम अन्वेषण र उत्खनन गर्न कानुन अभाव रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भूगर्भविद् खड्काले जानकारी दिए ।
‘यही रुपमा प्रगति देखिँदै जाने हो भने अबको ४ वर्षभित्र हामी उत्खनन्को तहसम्म पुग्छौँ, त्यसका लागि हामीले तत्कालै आणविक ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । भूगर्भ विभागका अनुसार, मकवानपुर, वैतडी र बझाङ जिल्लामा समेत युरेनियमको खानी भेटिएको छ । २० वर्षअघि छुसाङको तेताङ गाउँमा नुन उत्खनन हुने गरेपनि अहिले भने यो काम पूर्णरुपमा बन्द छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रमुख राजन पौडेलले स्थलगतरुपमा गरिएको अध्ययन र सङ्कलन गरिएको तथ्यबाट मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र तेताङमा नुनको खानी रहेको पुष्टि भएको बताए ।
‘नुनका विषयमा हामी सबै जानकार छौँ, त्यसका साथै पेट्रोल र युरेनियमको खानी रहेको औपचारिक रुपमा पुष्टि भयो,’ प्रमुख पौडेलले भने ।
लोमान्थाङमा युरेनियम अन्वेषणका लागि उद्योग मन्त्रालयले थप प्राविधिक टोली छिट्टै खटाउने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘कानुन बनाउन पनि मन्त्रालय लाग्नेछ भने त्यसपूर्व यसको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन,आवश्यक परे विदेशी सहयोग पनि लिन्छौँ,’ उनले भने ।
सोमबार मुस्ताङ पुगेको टोली बुधबार राजधानी फर्किएको छ ।-रासस
6/30/2016 12:54:00 PM राजनीति , समाचार
न्याय पाउने आशा : सत्य निरुपण आयोगमा ४५ हजार उजुरी
6/30/2016 12:50:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असार १६ गते ।लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाउने आशामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उल्लेखनीय रुपमा उजुरी आइरहेका छन् ।
आयोगले परेका उजुरीको प्रारम्भिक चरणमा द्वन्द्वकालको घटना भएकाले आवश्यक प्रमाण पुगे÷नपुगेको अध्ययन गर्नेछ । प्रमाण नपुगेका र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकालाई तामेलीमा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । “हत्याको कति ? विस्थापितको कति ? सम्पति कब्जाको कति ? पहिलो चरणमा छुट्याउने काम गरिन्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणका अनुसन्धानमा पुग्छौँ”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भनिन् ।
आयोगले दोस्रो चरणमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध – हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक र मानसिक यातनालाई हेर्नेछ । त्यससम्बन्धी उजुरी आयोगका पाँच पदाधिकारीले मात्र हेर्ने तय भएको छ । “गम्भीर अपराधका उजुरी खामबन्दी हुन्छ, त्यो खोल्दै खोल्दैनाँै, पाँचजना पदाधिकारी बसेर मात्र छलफल गरिन्छ”, झाले थपिन् ।
आयोगले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाहेक ७३ जिल्लाबाट उजुरी सङ्कलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये मध्यमपश्चिमबाट सबभन्दा बढी उजुरी आएको छ । रुकुम, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लाबाट उजुरी बढी परेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र व्यक्तिमाथि भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई यो आयोगले हेर्नेछ । आयोगस्तरमा स्थानीय शान्ति समितिले उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ । महिलासम्बन्धी उजुरी लिन विशेष व्यवस्था गरेको छ । पीडितले पानामा लेखेर दिएको उजुरीसमेत आयोगले लिएको छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान हुँदैन
सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल फागुन १४ गतेको फैसलाअनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनिएको छ । “गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन अभियोग लागेकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर छाड्छौं, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा क्षमादान दिइँदैन”, आयोगका सदस्य झाले जोडिन् ।
बलात्कार युद्धको नियमभित्र पर्दैन । युद्धको बेलामा बलात्कृत भएको भए पनि त्यो क्षम्य हँुदैन । आयोगले महिलाको उजुरी लिन महिला कर्मचारीलाई नै खटाएको छ । यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा आयोगले क्षमादान दिँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अन्तिम संयन्त्रका रुपमा आयोगको गठन गरिएको हो । “उजुरी नदिए छुट्नुहुन्छ, छुटे परिचयपत्र पाइँदैन, त्यति मात्र हैन, परिचयपत्र नभएपछि सरकारले परिपूरण पनि दिँदैन”, आयोगका सदस्य झाले कोही पनि नछुट्नका लागि उजुरी गर्न आग्रह गरिन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी उजुरी लिने क्रममा धेरै जिल्लामा पुगेका छन् । पीडितका कुरा सुन्दा आँखा रसाएका थुप्रै घटना छन् आयोगका सदस्य मञ्चला झासँग पनि । “पीडित अनुगमनका क्रममा रुकुममा एकपटक रोएकी छु, धेरै पटक भावविह्वल भएकी छु”, झाले सुनाए ।
आँखा रसाएको रुकुमको कहालिलाग्दो घटना आयोगका सदस्य झाले सुनाए। तत्कालीन द्वन्द्वमा एक महिलाका श्रीमान्लाई दुई टुक्रा पारेर मारिदिएछन् । आफ्नै आँखाअगाडि टाउको एकातिर र शरीर अर्कोतिर भएकोे बिलौना गर्दै उनले सुनाए । “त्यो महिलाको वेदना सुनेर म आफूले आफँैलाई थाम्न सकिनँ, आँसु झ¥यो,” उनले भने ।
रुकुमकै अर्को घटना पनि उनले सुनाए । द्वन्द्वको समयमा एक पुरुषको दुवै आँखामा तेजाब हालिदिएको रहेछ । कालो चस्मा खोलेर उनले देखाए । आँखामा मासुको डल्लो मात्र देखिन्थ्यो । त्यो देखेर म निकै भावविह्वल भएँ, उनले भने ।
“त्यस्तै, सप्तरीको एक घटनाले निकै लामो समयसम्म पिरोल्यो । तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा बलात्कृत भएकी महिलाले शरीरभरि चुरोटले डामिएको दाग देखाउनुभयो । राज्यपक्षबाट आफूलाई शरीरभरि चुरोटले डामेर बलात्कार गरेको सुनाइन् । त्यो सुनेर म भक्कानिँए,” उनले भने ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयलाई लिएर आयोगमा दलका नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । आयोगले कारबाही गर्छ कि गर्दैन रु भन्ने कुरा उठिरहेको छ । “ठूला नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ, आयोगका लागि कोही ठूला कोही साना हुँदैनन्, सबै पीडित र पीडक हुन्”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले जोडिन् ।
उनका अनुसार चाहे ठूला वा साना । ती व्यक्तिबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएमा कसैलाई पनि छोड्दैनौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ । जस्तै, चाहे दोरम्बा होस वा कालीकोट, बाँदरमुढे वा रुकुमका घटनाका विरुद्ध उजुरी परेका छन् । त्यसको आयोगले उजागर गरेरै छोड्छ ।
आयोगले ९ बजेदेखि ६ बजेसम्म उजुरीका लागि खुल्ला गरेको हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिन, शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पनि यही आयोग हो ।
“आयोगको काम अपराधशास्त्रलाई जन्म दिने हैन, मेलमिलाप र क्षमादान गराउनु पनि हो, ऐनले जसरी परिभाषित गरेको छ त्यसअनुसार क्षमादान गर्ने व्यवस्था छैन”, आयोगका सदस्य झाले ऐन संशोधन गर्न पठाएको जानकारी दिइन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ४ गते भएको थियो । २०७३ सालमा शान्ति सम्झौताको १० वर्ष पुग्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन २०७१ साल माघ २६ गते स्थापना थियो । आयोगले सत्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । रासस
6/30/2016 12:47:00 PM समाचार
Euro Preview : पोर्चुगल र पोल्याण्डमा कसले बाजी मार्ला ?
6/30/2016 12:42:00 PM खेलकुद
समय र स्थान : फ्रान्सको मार्सेलीस्थित स्टेडी भेलोडोर्मीमा शुक्रबार पोल्याण्डले पोर्चुगलको सामना गर्नेछ ।
पोल्याण्ड विरुद्ध हुने क्वाटरफाइनल खेलमा क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो अझै परिपक्व ढंगबाट प्रस्तुत हुने अनुमान गरिएको छ । विश्वकै नम्बर एक फुटबलरका रुपमा उनीभन्दा अघि रहेका लियोनल मेसीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएपछि रोनाल्डोसामू केही गरेर देखाउने अवसर छ । रोनाल्डोलाई के थाहा छ भने एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उपाधी जित्नसके मेसीभन्दा उनको नाम अगाडी आउनेछ । त्यसका लागि यस संस्करणको युरो जत्तिको सहज मौका अर्को नहुन सक्छ । ढल्कदोँ उमेरका कारण पनि रोनाल्डोका लागि युरो २०१६ उपाधी जित्ने लगभग अन्तिम अवसर हो ।
रोनाल्डोले गत संस्करणमा पोर्चुगललाई युरोको सेमिफाइलनसम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर स्पेनसँग टाइब्रेकरमा पराजित भएपछि रोनाल्डोको उपाधी जित्ने सपना चकनाचुर भयो । सन् २००८ मा पोर्चुगल क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरिएको थियो । घरेलु मैदानमै भएको युरो २००४ मा भने पोर्चुगल फाइनलसम्म पुग्यो । त्यही युरोकपले म्यानचेस्टरका युवा विंगर रोनाल्डोलाई विश्वचर्चित खेलाडी बनाएको हो । तर लुईस फिगो, रुई कोस्टा लगायत चर्चित खेलाडीले भरिएको पोर्चुगल ग्रिससँग फाइनलमा पराजित भएपछि इतिहासमै पहिलो उपाधी जित्न असफल भयो । रोनाल्डो खेलपछि निकै बेरसम्म रोए ।
सन् २००४ मा उपाधी नजिक पुगेर पनि असफल भएको पोर्चुगल पहिलेजस्तो बलियो अवस्थामा छैन । रोनाल्डो पहिलेभन्दा निकै निखारिएका छन् । उनी पोर्चुगलका कप्तान र प्रमुख खेलाडी हुन् । त्यसैले आजकल पोर्चुगलको हार र जीतको फैसला रोनाल्डोकै प्रदर्शनमा निर्भर हुन्छ । सेमिफाइनलमा क्रोयशियासँग १ सय १७ मिनेट मैदानमा डटेका पोर्चुगिज खेलाडीहरु पोल्याण्ड विरुद्ध जीत हासिल गर्दै अन्तिम चारको यात्रा गर्न अग्रसर छन् । पोर्चुगललाई सजिलो के पनि छ भने अन्तिम चारमा पुग्न सके वेल्स वा बेल्जियममध्ये एक प्रतिद्धन्द्धी उसले पाउनेछ । यि दुबै टोलीलाई हराउनु उसका लागि खास गाह्रो विषय होइन ।
पोल्याण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । पोल्याण्डको इतिहास पोर्चुगल जत्तिको गौरवपूर्ण छैन । तर टोलीमा रोर्बट लेवान्डोस्कीजस्ता गेम चेन्जर छन् । त्यस्तै उनीहरुको डिफेन्स मजबुत छ ।
पोल्याण्डका लागि लुकाज फाबियान्स्कीले खेल्नेछन् । वोजसिच सेजेस्नी अझै चोटसँग संघर्ष गर्दैछन् । आर्काडियूज मिलिकले अहिलेसम्म थुप्रै मौका खेर फालिसकेका छन् । त्यस्तै रोर्बट लेबान्डोस्की पनि फ्रान्समा चल्न सकेका छैनन् । तर पनि पोल्याण्डले यिनै खेलाडीमाथि भरोसा राख्नेछ ।
पोर्चुगलले रिकार्डो क्यूरिज्मालाई नखेलाउन सक्छ । उनले यसअघि क्रोयशिया विरुद्ध निर्णायक गोल गरेका थिए । रेनाटो सान्चेज भने पोर्चुगलको सुरुआती एघारमा हुनेछन् । यसबाहेक पेपे, रिकार्डो काल्भारो, नानी र रोनाल्डो पोर्चुगलका लागि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने खेलाडी हुन् । पोल्याण्डका प्रशिक्षक एडम नावाल्काले आफ्नो टिम लेवान्डोस्कीमाथि भर नपरेको बताएका छन् –‘उनले हाम्रो टोलीका लागि निकै राम्रो खेल्दैछन् । तर हाम्रो टोली कुनै एक खेलाडीमा निर्भर छैन् । सबै खेलाडीले एकअर्काको भावना बुझेर खेलेकै कारण हामीले यहाँसम्मको यात्रा गरेका हौँ ।’– प्रशिक्षक एडमले भनेका छन् ।
यता, पोर्चुगलका प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले क्रोयशिया विरुद्धको खेलपछि आफ्नो खेलाडीहरुले राम्रो पाठ सिकेको बताएका छन् । ‘त्यो खेल निकै रोमान्चक, रणनीतिक र उत्कृष्ट थियो । खेलाडीहरुले त्यस खेलबाट धेरै सिके ।’ उनीहरु अझै उत्कृष्ट भएर प्रस्तुत हुनेछन् ।’– सान्तोषले भनेका छन् ।
हेर्नलायक खेलाडी : नानी
जारी प्रतियोगितामा नानीले २ गोल गरेका छन् । उनले समूह चरणमा आईसल्याण्ड विरुद्ध एक गोल गरे भने हंगेरी विरुद्ध पोर्चुगलले ३–३ गोलको बराबरी खेल्दा अर्को एक गोल गरे । विपक्षी खेलाडीहरुले पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोलाई मार्क गर्दा नानीले गोल गर्ने संभावना रहन्छ । नानी दाहिँने खुट्टाले उत्कृष्ट खेल्छन् । तर थुप्रै मौकामा उनले देब्रे खुट्टाले पनि करामत देखाएका छन् । रोनाल्डो र नानी एकसाथ मैदानमा खेल्दा विपक्षीहरुलाई जहिल्यै अफ्टेरो महसूस हुन्छ किनकी दुई खेलाडीमध्ये एकलाई मार्क गर्दा अर्को खेलाडीले क्षणभरमै खेल परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ ।
सन् २००७ मा म्यानचेस्टर आएपछि नानीको तुलना रोनाल्डोसँग हुदैँ आएको थियो । तर सन्काहा स्वभावका कारण नानी जहिल्यै विवादमा फसे । उनीमाथि सधैँ आफ्नो क्षमताअनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लाग्छ । त्यति हुदाँ हुदँै पनि नानी बिग म्याच प्लेयर हुन् भन्ने विषयमा कसैलाई शंका छैनन् । उनी गोल गर्नभन्दा पास दिन माहिर छन् ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा ८ सिजन बिताउने क्रममा नानीले ४ प्रिमियर लिग, एक पटक च्याम्पियन्स लिग र क्लब विश्वकपको उपाधी जितिसकेका छन् । सन् २०१५ मा म्यानचेस्टर युनाइटेड छाडेपछि लोनमा आफ्नो पुरानै क्लब स्पोर्टिङ सिपि फर्किएका नानी त्यसै वर्ष टर्किस क्लब फेनरवासतर्फ गएका थिए । उनले फेनरवासमा २८ खेल खेल्दै ८ गोल गरिसकेका छन् । २९ वर्षका नानीका लागि यस संस्करणको युरो ठूलो उपाधी जित्ने अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ ।- रातोपाटीबाट
संसद बैठक बस्दै, बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका दुई दिन सर्‍यो
6/30/2016 12:39:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौं,असार १६ गते । व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज बस्दैछ । विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
मन्त्रालयगत छलफलमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाई, श्रम तथा रोजगार लगायत सातवटा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुने कार्यतालिका रहेको छ । उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले दिनेछन् । यसअघि बिभिन्न १५ वटा मन्त्रालयमाथि विनियोजित विधेयकबारेको छलफल सकिएको छ ।
यसैबीच, कांग्रेसको अवरोधका कारण विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएपछि संसद सचिवालयले पूर्ण बजेट पारितको कार्यक्रम दुई दिन पछि सारेको छ । यसअघि १७ गते छलफल सक्ने, १९ देखि २२ गतेसम्म छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र २२ गते पूर्ण बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीकांग्रेसले भूकम्पपीडितले एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने माग गर्दैै केहि दिनयता अवरुद्ध गर्दै आएको संसद सत्तारुढ तीन दलसँगको सहमतिपछि बुधबारबाट सुचारु भएको छ । भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार र दोस्रो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने सहमति दलहरुबीच भएको थियो ।-अनलाइनखबरबाट
6/30/2016 12:33:00 PM समाचार
काठमाडौं, असार १६ गते । सरकारमा रहँदा मन्त्रीहरु राज्यस्रोतबाट उच्चस्तरको सुविधा भोगमात्र गर्दैनन्, आफ्ना दलका नेता-कार्यकर्तालाई समेत सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । अधिकांश मन्त्रीहरुले राज्यस्रोतमाथि अधीक दोहन गरिरहेका छन् ।
तर, कानुनले मन्त्रीहरुले पाउने सुविधा निश्चित गरेको छ, त्योभन्दा बढी सुविधा लिएमा उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् । उनीहरुलाई सतकर्ता केन्द्रले सचेत गराउन सक्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कारवाही चलाउन सक्छ ।
हामीले यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले उपभोग गरिरहेको सुविधाबारे चर्चा गरेका छौंः
प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ छ । उनले सरकारबाट महिनामा ३ सय ६ लिटर पेटोल र ४० लिटर मोविल पाउँछन् । मोबाइल रिचार्जका लागि छुट्टै ५ हजारको व्यवस्था गरिदिएको छ सरकारले ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा ‘मसलन्द’ शीर्षकमा मासिक १० हजार रुपैँया पाउँछन् । काठमाडौँ बाहिर कुनै भ्रमणमा जानु परे प्रतिदिन प्रधानमन्त्रीले ३ हजार भत्ता पनि पाउँछन् । यसका अतिरित्त पनि प्रधानमन्त्रीका थप सुविधाहरु छन् । उनले ४५ जनासम्म सल्लाहकार र सहयोगीहरु नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले एकजना राज्यमन्त्री सरहको सुविधासहित प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । सचिव तहको सुविधा थाप्ने गरी दुई जना नियुक्त गर्न पाउँछन् । यस्तै सहसचिव तहको सुविधा लिने गरी ७ जना, उपसचिव स्तरका ३ जना र अधिकृत स्तरका ९ जना प्रधानमन्त्रीले राख्न पाउँछन् ।
त्यस्तै अधिकृत तहका एकजना फोटो ग्राफर, एक जना कम्प्युटर अधिकृत, र दुईजना कम्प्युटर सहायक तहका कर्मचारी पनि नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
यस्तै प्रशासन सहायकका रुपमा ९ जना, लेखा सहायकका रुपमा १ जना र ५ जना सवारी चालक एवं कार्यालय सहयोगीका रुपमा ४ जना नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार कानूनतः प्रधानमन्त्रीलाई छ । यसरी नियुक्त भएका सबैको पारिश्रमिक सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले आवास सुविधा र आवासका लागि आवश्यक सुविधा पाउँछन् । तर, यसरी तोकिएको भन्दा अतिरिक्त प्रधानमन्त्री भएकै कारण राज्यकोषबाट थप कुनै सुविधा लिएमा त्यो कानुन विपरीत हुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्रीहरुले कानूननतः एउटा मात्रै गाडी पाउँछन् । उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार १ सय ६० रुपैँया छ । उनीहरुले मासिक रुपमा २ सय ३८ लिटर पेटोल, २० लिटर मोविल सुविधाको रुपमा पाउँछन् ।
यो भन्दा थप इन्धन चाहिएमा आफैँले खरिद गर्नुपर्छ । यदि मन्त्रालय वा विभागबाट उनीहरुले थप सुविधा लिने गरेका छन् भने त्यो गैरकानुनी हो, जसमाथि अख्तियारले छानविन गर्न सक्छ ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्रीहरुले मासिक रुपमा ३ हजार संचारभत्ता, अतिथि सत्कारका लागि ४ हजार पाउँछन । राजधानी बाहिर जाँदा दैनीक ३ हजार भत्ता समेत पाउँछन् ।
उनीहरुको सुविधाका लागि ८ जनासम्म सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यसमा एकजना सहसचिव तहका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्छन् । उपसचिव तहको एक जना, अधिकृत तहको एक जना, सुब्बा तहको एक जना उपप्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ । त्यसैगरी दुई जना सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगीहरु पनि उपप्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुले गाडी, इन्धन वा थप कुनै सुविधा लिएमा त्यो गैरकानुनी मानिन्छ ।
कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट कानुनले तोकेको भन्दा बढी सुविधा लिन पाउँदैनन् । उनीहरुले पाउने सबै सुविधा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ ।
एउटा मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार ७ सय ७० हुन्छ । उसले सुविधाका लागि एउटा गाडी, २ सय ७ लिटर इन्धन र २० लिटर मोविल पाउँछ ।
मन्त्रीले पाउने मासिक सञ्चार खर्च ३ हजार हुन्छ । त्यस्तै अतिथि सत्कारका लागि मासिक ३५ सय दिइएको हुन्छ । मन्त्रीले राजधानी बाहिर जाँदा प्रतिदिन ३ हजार भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
मन्त्रीले ७ जनासम्म सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये उपसचिव तहको एक जना, अधिकृत तहको एक जना, सुब्बा तहको एक जना, सवारी चालक २ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना मन्त्रीले राख्न पाउँछन् ।
सरकारले राज्यमन्त्रीलाई मासिक ४६ हजार २ सय २० रुपैँया पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछ । अन्य मन्त्रीहरुलाई जस्तै राज्यमन्त्रीलाई पनि एक थान सुविधाको गाडी उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
यस्तै मासिक १ सय ८० लिटर इन्धन र २० लिटर मविलका साथै ३ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च राज्यमन्त्रीले पाउँछन् । उनीहरुले पनि राजधानी बाहिर जाँदा प्रतिदिन ३ हजार भत्ता पाउँछन् । र, मन्त्रीकै सरह सचिवालय नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
सहायक मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४५ हजार १ सय ९० रुपैँया छ । एक थान गाडी र गाडीका लागि मासिक १ सय ८० लिटर इन्धन र २० लिटर मोविल सुविधाको रुपमा पाउँछन् । ३ हजार सञ्चार भत्ता हुन्छ ।
सहायक मन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि थप २५ सय रुपैँया पाउँछन् । राजधानी बाहिर जाँदा दैनिक ३ हजार भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
सहायकमन्त्रीले उपसचिव तहको एक जना, सुब्बा तहको एक जना, एक जना सवारी चालक र एक जना कार्यालय सहयोगी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
जिल्ला दौडाहामा लाग्ने नियम
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीका लागि कानुनले केही नियमहरु समेत बनाएको छ । जिल्ला भ्रमणमा जाँदा उनीहरुले एकजना सुरक्षाकर्मी, एक जना मन्त्रीको स्वकीय सचिव र मन्त्रालयको तर्फबाट एकजना गरि ३ जनासम्ममात्र जानुपर्छ । जिल्लामा जाँदा उनीहरुका लागि थप सुरक्षा व्यवस्था जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने निर्देशिकाले निर्धारण गरेको छ ।
उनीहरुले एउटा जिल्लामा अनावश्यक २ दिनभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् । यदि बस्नुपरेमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृत चाहिन्छ । र, भ्रमणबाट फर्किएपछि भ्रमण गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धी समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।
तर, कुनै पनि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले कानुनको निर्देशन मानिरहेका छैनन् ।
तेल सुविधामा घोटाला गर्दै कमल थापादेखि विजय गच्छदारसम्म
यसरी पोसिँदैछन् पूर्वभीभीआइपीस् एकजनालाई वार्षिक ४० लाखको सेवासुविधा
6/30/2016 12:30:00 PM समाचार
भीमदत्तनगर,असार १६ गते । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरले बिहीबार बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गजुरेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न, निर्वाचन गराउन, संविधान कार्यान्वयनका साथै संवैधानिक सङ्कट आउन नदिन तत्काल दलबीच सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘ढिलो भइसकेको छ,’ मन्त्री गजुरेलले भने, ‘जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बने पनि तत्काल बनाउनु आवश्यक छ ।’
नेपाली काँग्रेस ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नै नेतृत्व र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सहज हुने भन्दै आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार खोजी रहेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ थियो ।
क्षमा मागे मन्त्रीले
त्यसैगरी बुधबार राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गमलामा धान रोपेकोमा टीकाटिप्पणी भएपछि मन्त्री गजुरेलले गमलामा धान रोपेर कार्यक्रममा उदघाटन गर्नुलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे ।
उनले गमलामा धान रोप्ने विषयमा पत्रकारले समाचार बनाउनुलाई पत्रकारिताको अधिकार भएको बताए । ‘यसले किसान दाजुभाइमा कुनै समस्या परे क्षमा चाहन्छु,’ मन्त्री गजुरेलले भने, ‘गमलामा पानी हालेर उदघाटन गर्नु कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पनि हो ।’
कृषिमन्त्रीको कलाः करुवाले पानी हालेर गमलामा रोपाईँ ,
6/29/2016 05:51:00 PM मनोरञ्जन
मनोरञ्जन विधामा फेरिँदैछ कृषि पेशा
काठमाडौं । तस्वीरमा देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा युगल जोडी छेउमा धानको बीउका मूठा राखेर हिलोमा झ्वाम्मै चोपलिएको छ । तर, यो कुनै सक्कली रोपाईँ होइन, बरु रोपाहार र बाउसेको भेषमा गरिएको ‘मोडलिङ’ हो ।
गाउँका किसानले असार १५ लाई ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन’ का रुपमा लिन्छन् । उनीहरुका लागि आजको दिन ‘दिसा गर्न बसेका बेला पिसाब फेर्न फुर्सद नहुने’ दिन पनि हो । तर, अब यसलाई किसानको दुःख र धपेडीसँग मात्रै तुलना गर्न मिलेन । असारे हिलोमा ‘मोडेल’हरु समेत लत्पतिन थालेपछि नेपालको कृषि पेसामा अब मनोरञ्जन विधा समेत प्रवेश गरेको छ ।
विगतका दिनमा रोपार, बाउसे र हलीहरुको हुलसहित हिलाम्मे खेतमा धान रोप्न निस्किन्थे किसानहरु । यो कुनै रहर नभएर पेट पाल्नका लागि हिलोमा पस्नुपर्ने बाध्यात्कम कर्म थियो उनीहरुको । तर, बदलिँदो समयक्रमसँगै रोपाइँको मौलिकता अब कस्मेटिक बन्न थालेको छ । यस्तो लाग्छ, धान रोप्ने हिलो आजभोलि बहुउपयोगी भएको छ । हिलोमा मोडलिङ गरेर चलचित्रको प्रचार गर्ने माध्यम पनि बनेको छ असारे हिलो ।
असार १५ मा हिलोमा चोपलिने र तस्वीर खिचाउने काममा कलाकार मात्रै छैनन्, नेताहरु पनि छन् । बुधबार काभ्रेमा एमाले नेता वामदेव गौतमले गरेको रमाइलो होस् या ललितपुरमा भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार राईले खेलेको हिलो होस्, यसबाट असार १५ को ‘मोडलिङ’मा कलाकारदेखि नेतासम्मको आकर्षण बढेको पुष्टि हुन्छ । र, यसलाई किसानहरुले निन्दा गर्नुभन्दा आफ्नो पेशाप्रतिको अन्य निकायको आकर्षणका रुपमा लिने हो भने असार १५ साँच्चै नै एउटा राष्ट्रिय महोत्सवजस्तो बन्न सक्छ ।
विगत केही वर्षयता हिलोमा चोपलिने कामलाई गैर कृषि क्षेत्रबाट पनि रमाइलोका रुपमा लिने चलन सुरु भएको छ । नायक नायिका र मोडेलहरु नयाँ पहिरनसहित चिटिक्क परेर खेतमा पस्छन् र एकअर्कामा रमाइलो गरेर फर्किन्छन् ।
असार १५ लाई यसरी नै रमाइलो गरी मनाउन मोडलद्वय निराजन प्रधान र सम्पदा बानियाँ काभ्रेको पनौतीमा यसरी प्रस्तुत भएः
हेर्नुस् थप तस्वीर